Vanopa mazano, maContrakta nevashandi: Tiri kuenda kupi? | Martech Zone
Consultants, Contractors uye Vashandi: Takananga kupi?
Chishanu, April 6, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kazhinji, ini ndinonzwa kuchema kwekurwadziwa kana tichienda kune vanopa mazano vekunze kana makondirakiti kuti basa ripedzwe. Mamiriro akaomarara - dzimwe nguva vashandi vanonzwa kunge vari kutengeswa kuti urikuenda kunze. Chaizvoizvo kutendeseka, kune iyo yekudzidzira curve uye yekuwedzera mari yekuenda kunze. Pane zvakanaka, zvakadaro.
Ndinoda dombo iri kubva Kuora mwoyo:
Kuseka padivi, vanachipangamazano uye makondirakiti vanoziva chokwadi chekuti kana vasingaite, havazodzoke. Nguva. Ndiwo mukana mumwechete wekusimbisa kuvimba mutengi kuti uwane rimwe basa. Zvakare, hapana imwe yeimwe nyaya inosanganisirwa nevashandi - zororo, mabhenefiti, ongororo, kuraira, mutengo wekudzidzisa, zvematongerwo enyika, nezvimwe.
Vashandi ndeyenguva refu yekudyara. Izvi zvingaite kunge zvisina hunhu, asi zvakafanana nekutenga imba kana kuroja imba. Imba yacho inoda kutarisisa kwakanyanya uko kunozotarisira kubhadhara mukufamba kwenguva. Asi zviri kubhadhara chaizvo here? Kana iwe uine mutero uko vanhu vasiri kugara kweanopfuura makore mashoma, urikuwana yako kudzoka pane kudyara?
Vanachipangamazano nemakontrakta vane zvakare ruzivo rwekushandira vatengi. Ndiwe mutengi wavo uye chinangwa chavo ndechekukufadza. Dzimwe nguva izvi hazvisizvo nevashandi. Vashandi vane tarisiro kune vavanoshandira - dzimwe nguva vane simba kupfuura zvinopesana.
Sezvo rubatsiro rwehutano rwuchikwira uye kuwanda kwevashandi kuri kuramba kuri dambudziko, ndinoshamisika kuti isu hatishandise makondirakita uye vanopa mazano zvakanyanya nekuwedzera kuita basa redu. Izvi zvinosuruvarisa neimwe nzira, asi zvinonyatsoparadzanisa gorosi nehundi. Ini ndinofunga zvinonyatsotora rakasimba rakasimba sangano kuvaka hwaro hwevashandi avo vakanakisa zvekuti haufanire kumbotarisa zvekunze kwehunyanzvi - uye iwe unobhadhara zvakakwana zvekuti haufanire kunetsekana navo vachienda. Kune yakadaro kambani?
Chakavanzika cheGoogle PejiRank Yakagadziriswa
Apr 6, 2007 pa 9: 50 AM
Nehurombo Doug, hapana makambani akawandisa aripo akadai, ini handizive nezvawo. Ini ndinofunga dzimwe nguva kambani inoda kusanganisa zvinhu zvishoma uye kuwana rubatsiro rwekunze, vashandi vanogona dzimwe nguva kurega zvimwe zvinhu zvakawanda zvichikanganisa kuita kwavo semubhadharo, kusimudzira basa, uye Hutano hwekutarisira kutaura zvishoma. Sezvawakataura dzimwe nguva mari yenguva refu haibhadhare.
Apr 6, 2007 pa 12: 35 PM
Izvo makambani anowanzo tadza kuona ndezvekuti ivo vanopa mapurojekiti matsva uye anonakidza kune vanopa mazano vachinamatira vashandi vavo varipo nebasa rekugadzirisa. Izvi zvinopesana nepfungwa yekuti vashandi imari yenguva refu. Chikamu chezvandaifarira zvekuve consultant ndechekuti paive nemukana wakanaka wekuti every project yaizondifumura kune zvitsva.
Kana vari varairidzi vari kutemwa kana vakasaita, izvo kazhinji hazviitiki nekukurumidza. Saka vanopedzisira vaita chinhu uye vachiri kubhadharwa. Izvi zvinomutsa hasha pakati pevashandi.
Apr 6, 2007 pa 12: 32 PM
Kubva pamaonero evashandi, ndinofunga dzimwe nguva unofanirwa kutarisa kupfuura nhamba kuti chii chinochengeta mushandi ari pedyo.
Makore mashoma apfuura ndakashanda semugadziri akazvimirira pafemu yemazano ezvematongerwo enyika. Ndakatenga inishuwarenzi yangu yehutano uye ndakanga ndisina chirongwa chekurega basa. Ndaiona basa racho se“tsoka yangu pamukova” wezvamatongerwe enyika. Hazvina kushanda saizvozvo. Asi handizvidembi. Kutaura zvazviri, ndaifarira kushanda ikoko. Boss vangu vaivimba neni, vaisatarisa pabendekete rangu. Pamutemo haana kukwanisa kuziva kuti ndashanda maawa api (zvino zvakare mune zvematongerwo enyika unoshanda 24/7).
Iye zvino ndiri kushanda semushandi weSEM agency. Ndakaramba inishuwarenzi yehutano b/c yemurume wangu yanga irinani uye kambani ndeyekutanga saka hapana mabhenefiti. Muhoro wangu i5k ishoma pane yandakaita makore mashoma apfuura. Asi unozivei? Ndinoda basa. Vandinoshanda navo vakanaka uye pane dhirama shoma. Tine nguva yekuchinja iyo inotyisa b/c kurera vana kunopenga nechikoro nezvese.
Handirambe kuti mari ndeye TIGHT. Asi pfungwa yekudzokera kune imwe nzvimbo yebasa yechinyakare - zvakanaka, handikwanise kana kuinzwisisa - chero mari. B/c ndinofara. Uye iwe haugone kunyora izvo mubhadharo.
Apr 6, 2007 pa 2: 47 PM
Vamwe vanhu vanofungidzira kuti kana zvichitora mukadzi mumwechete 9 mwedzi kuti ave nemwana, vanogona kuhaya vamwe vanachipangamazano vechikadzi 8 uye neimwe nzira kuburitsa mwana mumwedzi mumwe.
Dzimwe nguva, haingoshande sezvaitarisirwa.
Apr 7, 2007 pa 9: 36 AM
Semubatsiri, ndinofunga zvakanaka. Hongu, haina kugadzikana, asi inobvumira rusununguko rwakawanda, uye ndinowana kusarudza mukuru wangu. Ndinofanira kutenga zvangu mabhenefiti (zvisina kushata - ndiri kuCanada asi ndinonzwisisa kuti zvinodhura kune dzimwe nzvimbo).
Iniwo ndinofunga zvinoenderana nebasa. Ini ndiri muongorori wewebhu. Vanhu vazhinji vanoda kugadziridzwazve makore mashoma vobva vawana jr. zviwanikwa zvekuchengetedza. Saka inoshanda. Mamwe mabasa anoda nguva yakazara. Ndiri kufunga nezvechipangamazano wangu wezvemari - handingade kuti ave kondirakiti kana gonhi rinotenderera revarume vakasiyana. Mamwe mabasa anoda kugadzikana ikoko.
Apr 7, 2007 pa 10: 08 AM
Ini ndinobvumirana neiyo generalization kuti muzviitiko zvakawanda, mupi wezano anotyairwa zvakanyanya uye anopa zvirinani basa revatengi kupfuura vashandi vemukati. Vashandi vanoita zvishoma vanowanzoita saizvozvo nokuti havasi kuita basa ravanoda uye rakanakisisa, havapiwi mubairo kana vakaita kana kuti vasina kurangwa kana vakasaita zvakanaka. (Chokwadi, kune zvimwe miriyoni zvimwe zvikonzero, asi ini ndiri kuita generalizing pano).
Asi hukama hwekubvunzana hunogona kuiswa mune izvo ruts futi. Ini ndinofunga mukana ndewekuti nekusarudzika, iwe unohaya mupi wezano kuti aite chimwe chinhu chaanofunga kuti akanaka pachiri uye anoda kuzviita. Uye pane mubairo wakananga/chirango chebasa rakaitwa ... hapana nzira yauchaisa mubhadharo wemushandi wechigadzirwa chakanonoka kutumirwa. Uye vashandi vanogaroziva kuti vane basa zvisinei nekuti chii ... kana chigadzirwa chikaenda nenguva vanogona kutarisira kukwidziridzwa ne4%, nepo murairidzi achitarisira kushanda kwakawanda munzira kana kondirakiti yakanaka yekugadzirisa.
Zvechokwadi kune akawanda evapi mazano akaipa kunze uko, uye ura hwangu hunonzwa kuti zvakaoma kuwana mupi wezano mukuru sezvazviri kuwana mushandi mukuru. Ndinofunga kana iwe ukawana hombe kune imwe, iwe enda nayo. Uye kana iwe wakanamatira kune yakaipa yeimwe, iwe unofanirwa kuenderera mberi.
Great post Doug ... zvakawanda zvekufunga nezvazvo, uye chimwe chinhu chiri mupfungwa dzangu zvakanyanya sezvo vazhinji vevatengi vangu vari munzvimbo yavari kuedza kuona kana vachindipinza basa semubatsiri kana kuhaya mumwe munhu semushandi.
Apr 11, 2007 pa 9: 17 AM
Yakanyanya kunakidza post. SeVirtual Assistant, ini ndiri mukontrakta nechinguva chidiki cheanopa mazano. Chinhu chimwe chinotishungurudza ipfungwa dzevashandirwi vanoda mushandi, asi vanoda kuvabhadhara semukontrakta kuitira kuti vadzivise mitero. Ndine urombo, asi iwe haugone kuwana keke rako woridya, zvakare. Semuridzi webhizinesi, handisi mushandi. Kana mutengi achida kuti ndiite senge (kugamuchira mirairo yakakomberedzwa, ndivepo pamubhedha wavo uye kufona, nzungu dzakabhadharwa), ivo vanozongondibhadhara semushandi, zvinoreva kuti inofanirwa kunge yakakosha yangu. nepo, nguva-yakachenjera, mubhadharo-kuchenjera, mabhenefiti-akachenjera uye mari-yakachenjera (hongu, vashandi vanobhadharirwa midziyo yavo uye mari inodzoserwa). Kana vasingade kuita izvozvo, saka vanofanirwa kutanga kubvuma chokwadi chekuti makondirakiti haisi nzira yekunzvenga kutevedzera mutemo, uye kuti pachange paine kutengeserana-offs sekuti sevaridzi vebhizinesi, makondirakiti ari kuenda kunochaja mitengo yehunyanzvi inoratidza hunyanzvi hwavo, ruzivo uye kukosha, uye izvo zvinotsigira bhizinesi ravo zvine pundutso.